Home Wararka Garaaddadii Laascanood Ma Gunbey Noqdeen oo Biri-Mageydo lagu Hoos Xaraashi karo?.
Garaaddadii Laascanood Ma Gunbey Noqdeen oo Biri-Mageydo lagu Hoos Xaraashi karo?.
Iyadoo ay geed fadhi u tahay Laascaanood raggii Garaadada la baxay ee ahaan jiray hal doorka Somalida maanta waxay joogtaa inay raalli ka noqdeen caruur iyo haween iyo xoogsato weliba qaarkood ganacsi u geeyey degaankaas in Gawaari lagu soo guro sidii ari.
Dadnimada waa dhaqan ee u baahan in la ilaaliyo oo la qiimeeyo laakiin caqli maaha in haween iyo caruur muslimiin ah walaalo kuu ah, Somali kula ah inuu siyaasi Danley ah uu habeen madow raafo kuna guro gawaari sidii ay ajnabi kaa yihiin oo aadan ku daba dukaneyn waana ceeb iyo foolxumo u soo hoyatay Garaaddada degaankaas, gaar ahaan Garaadka Guud ee Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo aan wax ka dhihin ilaa iyo hadda.
Waa hubaal ah garaaddada caqliga leh inay ka qoomameyn doonaan dhacdadaan maalinta ay abaartu dhamaato ee ay reeraha doogsadaan Somaliyana dib cagaheedu isugu taagto, tallaabadaan wuxuushnimada leh ee degaankooda iyagoo jooga laga sameeyey.
Dhacdadaan xukuumad ismood kasta oo sameysay, ha noqoto tan Hargeysa joogta ee Muusa Biixi iyo Tan Muqdisho joogta, gaar ahaan wiilka daciifka ah ee Abtiga loo yahay ee Maxamed Farmajo iyo Fahad iska leh waxay reer Laascaanood iyo Garaaddadaba u geli taariikhda, waa gunnimo runtii ku habsatay reer ka mid Somalida kuwa ugu magaca dheeraa.
Dadku waa is dilaa, siyaasadna waa lagu kala duwanaadaa laakiin maxasta iyo biri ma geydada lagu tuman jirin oo inta habeen bar la soo ururiyo gawaari sidii ariga lama soo dhoofin jirin, laakin maanta Laascaanooda ay ka dhacday.
Xogo qarsoon oo la helayo ayaa waxaa la sheegayaa inay Villa Somaliya raad ku leedahay laakiin MOL ayaa waxay ku daba jirtaa arinkaas waxayna soo bandhigi doontaa cidkasta oo arrinkaas ku lug yeelataa.
Garaadyada deegaankooda la ceebeyey haddi aysan qeyb ka ahayn xumaantaan adduun iyo aakhiro cuqubadeeda yeelan doonta waxaa la gudboon:
Inay ka dhiihdhiyaan oo ku diidaan ciddii falkaan ku kacday, kuna qabsadaan.
Inay war cad ka soo saaraan waxa dhacay iyo cidda ka masuulka ah.
Inay cafis weydiistaan masaakiinta, magdhowna la siiyo laguna celiyo goobihii laga soo qafaashay.
In lala xisaabtamo ciddii Falkaan ka dambeysay.
Somaliland haddii ay ka masuul tahay waa tallaabo caddeyneysa fashilka iyo talaxumada ku socota godkii halaagga, waayo Somaliland waxaa ka jiray horumar ku dayasho mudan iyo dareen walaalnimo oo dadka dhulkaas degaa waxay weligood ahaayeen gob maganta iyo martisoorka ku wanaagsan, tanisa waa magac dilkii ugu weynaa ee taariikhda abid lagu sheegi doono.
Haddii Faramajo iyo Fahad ka masuul yihiin waa lagula xisaabtami doonaa oo waxay ku biireysaa xasuuqyada qoran ee gar sugayaasha ah maaliteeda ayeyna dhici doontaa In Shaa Allaahu.